Efa Novakianao Ve Ny Iray Amin’ireo Lahatsoratra Be Mpamaky Indrindra Nivoaka Teto Amin’ny Global Voices? · Global Voices teny Malagasy
Efa Novakianao Ve Ny Iray Amin'ireo Lahatsoratra Be Mpamaky Indrindra Nivoaka Teto Amin'ny Global Voices?
Voadika ny 15 Mey 2017 15:20 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Português, Français, Deutsch, Español, English
Vakoka malaza ao Singapaoro. Sary: Flickr / Leonid Yaitskiy (CC BY-SA 2.0)
Isan-kerinandro, rehefa mamerina mijery ny lahatsoratra be mpamaky indrindra eto amin'ny tranonkalan'ny Global Voices izahay dia anisan'ny lahatsoratra hita miavaka ny hoe “: Moa Ve Tanànadehibe i Singapaoro sa Firenena?”
Ao anatin'ny lisitray isan-kerinandro hatrany izy noho ny salanisany ambony miavaka avy amin'ny mpitsidika. Tamin'ny volana Martsa 2017, izy no lahatsoratra faharoa be mpamaky indrindra teto amin'ny tranonkalanay. Tena mahagaga izany satria tamin'ny taona 2009 ny lahatsoratra no nosoratana sy navoaka .
Faharoa amin'ny lahatsoratra malaza indrindra niseho teto ao amin'ny Global Voices hatrizay izy raha ny zotra an'aterineto no resahina.
Fa nahoana izy no malaza? Angamba noho ny lohateniny manana SEO mahasarika ve? Eny tokoa, iray amin'ireo valim-pikarohana miseho voalohany ny lahatsoratra rehefa misy ny fikarohana momba ny “Singapaoro Firenena” ao amin'ny Google. Ary izy no voalohany miseho rehefa misy mpisera aterineto iray te-hahafantatra bebe kokoa momba an'i “Singapaoro Tanànadehibe Firenena”.
Araka ireo namako Singapaoreana, tsy dia matetika no resahina ao amin'ny politika anatiny ny lohahevitry ny lahatsoratra, sy amin'ny adihevitry ny fampitam-baovao, ary any amin'ny fampianarana akademika. Mahafantatra tsara ny Singapaoreana fa mipetraka ao an-tanàndehiben'ny fanjakana izy ireo, noho izany, mihevitra aho fa mpizaha tany, na mpiasa mpifindra monina na mpisera tsotra fotsiny manerana izao tontolo izao no lohalaharana amin'ny zotra amin'ny fitadiavana fanazavana raha toa ka tanàndehibe na firenena i Singapaoro.
Tsy ny hiresaka mivantana ilay lohahevitra no tanjoko raha nanoratra azy io aho tamin'ny taona 2009, fa ny hanasongadina ny hoe nahoana ny hevitry ny minisitra tao amin'ny governemanta no niteraka adihevitra be an-tserasera. Raha namaly ny tsikera fa anjakan'ny antoko tokana (Antoko Katroky ny Vahoaka) ny demaokrasia ao Singapaoro dia gaga tamin'ny minisitra ny vahoaka rehefa nanizingizina izy fa tokony ho raisina ho toy ny tanàndehibe iray ny fireneny. Mazava ho azy fa niampanga azy ho “mandika vilana lojika” sy manao fampitahana diso mba hanamarinana ny fanjakazakan'ny antoko tokana ao Singapaoro ny bilaogera sasany sy ny mpisera hafa.
Nanangona ireo fomba fijery amin'ny olana tao anatin'ny fanantenana kely fotsiny aho fa mety ho lohateny hahazo fahombiazana tsy ampoizina eto amin'ny tranonkalanay izany.
Misarika ny saiko ireo rohy mankany amin'ny bilaogy sy tranonkala izay tsy misy intsony isaky ny mamerina mijery ilay lahatsoratra aho. Koa satria mbola mitohy hatrany hatramin'izao ny famakiana izany dia tokony hanavao izany ve aho amin'ny alàlan'ny fanesorana ny rohy tsy misy intsony ka hanolo azy amin'ny loharanom-baovao tsara kokoa sy vaovao kokoa? Tokony hanome fomba fijery fanampiny sy hanome valin'ny fanontaniana mazava kokoa ve aho ao amin'ny lohateny?
Navela tamin'izao ihany ilay lahatsoratra tamin ‘ny farany (na dia nandefasana sary mba hifanaraka amin'ny endriky ny fanavaozam-baovao aza izany taty aoriana). Notazomina ny teny notsongaina tao amin'ny bilaogy tranainy izay heveriko fa maneho ny asa nanirahana an'ny Global Voices amin'ny famoahan-kevitra izay tsy hita any amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra.
Tsy fantatro raha te hamantatra momba politikan'ny Singapaoro ao an-toerana ireo rehetra nitendry ny lahatsoratra, kanefa manantena aho fa nanaitra ny fahalianan'izy ireo izany tamin'ny fifidianana sy ny rafitra politika tao Singapaoro, ary mandrisika azy ireo aho mba hikaroka bebe kokoa momba ny tantara mifandraika amin'ny Singapaoro ato amin'ny Global Voices.